के हुँदै छ कोरलामा ? : चीनतर्फ झिलिमिली, नेपालतिर अँध्यारो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर के हुँदै छ कोरलामा ? : चीनतर्फ झिलिमिली, नेपालतिर अँध्यारो
on: २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार ०७:४७ मुख्य खबर, समाचार
के हुँदै छ कोरलामा ? : चीनतर्फ झिलिमिली, नेपालतिर अँध्यारो
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचका प्रमुख नाकामध्येको एक कोरलामा चीनतर्फ १० किलोमिटर (किमी) टाढासम्म कालोपत्र सडक निर्माण भइसकेको छ । नेपालतर्फ भने करीब १९० किमी तल म्याग्दीको बेनीसम्म मात्र कालोपत्र सडक तयार भएको छ । चीनतर्फ अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । नेपालतिर भने सुरक्षाकर्मी बस्न जस्तापाताले बारेर बनाएको टहरो मात्रै छ । नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा गत भदौमै सहमति बनिसक्दा पनि मुस्ताङको कोरला नाकामा नेपाली पक्षको तयारी शून्य बराबर छ ।
जबकि, चीनतर्पm सीमासम्मै १२ चक्के ट्रक आउन सक्छन् । सीमामा चिनियाँ भन्सारको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भइसकेको छ । ‘पारिपट्टि हे¥यो भने झलमल्ल बत्तीसहितको त्यत्रो भवन छ,’ लोमान्थाङका रामबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘यतापट्टि भने नेपाली सेनाका लागि बनाइएको टहरो मात्रै छ ।’
जमीनकै छैन टुंगो
सीमामा भन्सार खोल्ने औपचारिक घोषणा नहुँदै चीनले आफ्नोतर्फको काम अगाडि बढाइसकेको थियो । नेपालतर्फको संरचना विकास भने सोही गतिमा बढेन । गुरुङका अनुसार चीनले करीब २ वर्षयता नाकासम्म सडक विस्तार र भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको हो । नेपाली पक्षले भने हालसम्म भन्सार कार्यालय निर्माणका लागि जग्गाको समेत टुंगो लगाएको छैन ।
उक्त क्षेत्रमा व्यक्तिका जग्गा छैनन् । र, भन्सार कार्यालयका लागि सरकारले नै जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेका अनुसार जग्गाप्राप्तिका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ । भन्सार कार्यालयका लागि विभागले मन्त्रालयसँग १ हजार रोपनी जग्गा मागेको छ । ‘जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएपछि आवश्यक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘वैशाख लागेपछि अवस्थाको निरीक्षण गर्न जान्छौं र त्यसपछि संरचना निर्माणको काम थाल्छौं ।’ सीमासम्मको पहुँच मार्ग र कोरलामा बाक्लो हिमपात भएका कारण हिउँ नपग्लिई जाने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि कोरला जोड्ने सडक निर्माणको काम पनि नसकिएको घिमिरे बताउँछन् । ‘चीनसँगको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक सडक ट्रक गुड्नयोग्य बनाउनैपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य ट्र्याक कोरलासम्मै पुगेको छ । तर, लोमान्थाङभन्दा माथिको सडक खण्ड पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छैन ।’
नाका खुल्दा के हुन्छ ?
कोरलाको इतिहास प्राचीन साल्ट रूट (ढिके नूनको कारोबार हुने मार्ग) को केन्द्रका रूपमा थियो । साथै, यो तत्कालीन तिब्बतका बासिन्दा बौद्ध शिक्षा आर्जनका क्रममा नेपाल र भारत आउजाउ गर्ने बाटो पनि हो । सन् १९५० मा तिब्बतमा चीनको शासन शुरू भएको विरोधमा सन् १९६० मा तिब्बतको खामका बासिन्दा (खम्पा) हरूले नेपालको भूमि (मनाङ र मुस्ताङ) प्रयोग गरी विद्रोह थालेपछि यो नाका बन्द भयो, जुन अद्यापि खुल्न सकेको छैन ।
यो नाका खुले धार्मिक पर्यटनका साथै व्यापार व्यवसायमा फाइदा पुग्ने मुस्ताङ ‘क’ निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सांसद इन्द्रधारा बिष्ट बताउँछन् ।
वर्षेनि हजारौं संख्यामा कैलास मानसरोवर पुग्ने भारतीय पर्यटकमध्ये विहार र उत्तर प्रदेशका तीर्थयात्रीका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो यही हुनेछ । साथै, निकट भविष्यको भारत र चीनको व्यापार मार्गका रूपमा विकास गर्न लागिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखाका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।
सोही कारण गतवर्ष सम्पन्न तीनओटा तहका निर्वाचनमा मुस्ताङका उम्मेदवारहरूले कोरलासम्म सडक पुर्‍याउने र नाका खोल्ने विषयलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । तर, नाकाको विषय भएकाले दुई देशबीचको कूटनीतिक पहलकदमी आवश्यक रहेको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट बताउँछन् । चीनको पूर्वाधार विकासको गति हेर्दा उनीहरू छिटै नाका खुलाउन तयार देखिएको तर नेपालको पहल पुगेको नदेखिएको बिष्ट बताउँछन् । ‘चीनले छोटो समयमै नाकामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवासगृह समेत निर्माण गरिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोतर्फ पनि छिटो गर्नुपर्‍यो भनेर गाउँपालिका, जिल्ला र प्रदेशबाट पनि लबिङ भइरहेको छ ।’
उपल्लो मुस्ताङसम्म सडक नपुगुन्जेल त्यस क्षेत्रका बासिन्दा पूर्णतः चीनकै बजारमा निर्भर थिए । कच्ची सडक मात्र पुग्दा पनि अहिले उनीहरू स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुन थालेका छन् । उपल्लो मुस्ताङको गिलिङका साम्टेन धावाका अनुसार अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीद गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी पोखरा आउने गरेका छन् ।
दुई वर्षभित्र बेनीदेखि जोमसोमसम्म कालोपत्र र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ग्राभेल गर्ने योजना रहेको सांसद बिष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसका लागि करीब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
चीनपट्टि कोरला नाकाबाट ४६ किलोमिटरको दूरीमा ढोङ्बा जिल्लाको सदरमुकाम पर्छ । नाकासम्मै कालोपत्र सडक निर्माण चाँडै सक्ने चिनियाँ तयारी देखिएको लोमान्थाङका बासिन्दा बताउँछन् । कोरलाबाट ११० किमी टाढा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पर्छ । जोमसोम र कोरलाबीचमा करीब १३ ओटा गाउँ छन् । नाकामा हरेक वर्ष असार र असोजमा लाग्ने दुवै देशको संयुक्त मेला नै हालसम्म उक्त नाकाबाट हुँदै आएको कारोबार हो । मेला लागेका बेला मुस्ताङका बासिन्दा वर्षभरिका लागि आवश्यक सामान खरीद गरेर राख्छन् । मेलामा नेपाली व्यापारीले उवा र फापरको पिठो, चौंरीको छाला, चामल, मैदा, चाउचाउ, बिस्कुट लगायत सामग्री विक्री गर्छन् । हरेक दशैंमा तिब्बततर्फबाट भेडाच्यांग्रा नेपाल ल्याउने गरिन्छ । भन्सारको पूर्वाधार तयार नभएकाले त्यसका लागि वैधानिक बाटो छल्ने गरिएको छ । वैधानिक व्यवस्थापन भएपछि उक्त समस्या समाधान हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।
अभर पर्ने सडक
नेपाल–चीन दुवैतर्फ उस्तै भौगोलिक बनावट छ । चीनतिर अग्लो पर्खाल उठाउँदै सडक बनाइएको छ । नेपालतर्फको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकका अधिकांश भाग भने विनापर्खाल बलौटे डाँडा भत्काउँदै बनाइएको छ । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको सडक खण्डमा बेलाबेलामा पहिरो गइरहने समस्या छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा हुने मात्रा बढ्दै गएकाले जोमसोमदेखि माथि (उपल्लो मुस्ताङ) क्षेत्रमा पनि वर्षायाममा बाटो बिग्रिरहने मुस्ताङका पूर्वयुवराज जिग्मे सिंघी पलबर बिष्ट बताउँछन् । ‘पहिले पहिले त यो क्षेत्रमा पानी नै पर्दैनथ्यो । माटोको छाना भएका घर र बाटो दुवै सुरक्षित हुन्थे,’ बिष्ट भन्छन्, ‘गएको ३ वर्षयता वर्षामा पानी पर्ने मात्रा बढ्दै गएर धेरैको घर भत्कियो, ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएर गाडीबाट आउने पर्यटक पनि आउन पाएनन् ।’
अवैध कुखुराको आयात रोक्न नाकामा किसान
१० बैशाख २०७६, मंगलवार ०५:५९
कोरला नाका किन खुल्नुपर्छ ?
११ चैत्र २०७५, सोमबार १०:२२
बर्डफ्लु भित्रिन नदिन नाकामा निगरानी
७ चैत्र २०७५, बिहीबार ०८:५२
कोरलामा अन्तरदेशीय व्यापार मेला आजदेखि
१ असार २०७४, बिहीबार ११:२३